Ngokukhawuleza okanye kamva, nganye intombazana iqala ukusebenzisa izimonyo. Unokuthi, inqanda intombi yakho ukuba isebenzise i-mascara kunye nezithunzi phantsi kweminyaka eyi-18, kodwa ngaba uyaqiniseka ukuba uya kuthobela? Sikholelwa ukuba indlela efanelekileyo kukufundisa ubuhle obuncinci ukuba azinyame kwaye asebenzise izimonyo ngokufanelekileyo. Ngaba ubona abafundi bezikolo eziphakamileyo kunye neentsiphe eziluhlaza, umlomo wombala wamehlo kunye nama-intshi esiseko? Lapha! Abazange bafundiswe! Ngoko iibhululo zisesandleni - kunye nesimo sokulwa kwisibuko. Mva nje uphulaphule iingcebiso zabaculi abazenzayo abanamava ababelana ngeemfihlelo zabo zokudala i-teenager ngokwaneleyo. Uyenzela ntoni intombazana eyishumi elivisayo ukuba iqale ukwenza iinwele zakhe? Ikhumba elincinci ludinga indlela ephosakeleyo, ngoko kuya kuba nzima ukukwabelana ngezilumkiso kunye nentombi yakho. Kufuneka uphuphe enye entsha.
Ukuba le ntombazana inesikhumba esicocekileyo, ngaphandle kweempuphu, ubomvu kunye naziphi na iimpazamo, akukho mfuneko yokulungisa izilwanyana. Ikhumba elincinane likhangeleka ngakumbi kwinhlobo yalo yangaphambili, kunokuba ngaphantsi kweendlela zokuthambisa.
Ukuba ixesha le-pubescent lidlula kuzo zonke ezilandelayo, ukungafihleki kancinci kwesikhumba akusenzi buhlungu. Kwaye ukuba ngaphambi kokuba i-dermatologists igxininise ukuba isikhumba sengxaki kunako nayiphi na imeko ayinakufihlwa (bathi, ngaphantsi kwe-tonalmom acne kuya ekukhuleni), ngoko ngokuza kwama-masking creams baguqule ingqondo yabo. Okokuqala, umkhiqizo we-tonal unokuba nepropathi ye-antiseptic, kwaye okwesibini, ukhilimu uyakhusela ulusu kwindawo engqongqo-uthuli kunye nentlaka.
Umbala kunye nokuthungwa
Ukuba isikhumba sombuso sigubungelwe ngamathambo kunye nobomvu, ungasebenzisa ikhambi lokunqongophala ebusweni bonke, ukuba ukuvuvukala kunqabile kwaye kwendawo, kungcono ukuwafaka kunye nomfundi-mvavanyo.
Xa ukhetha indawo yokuthambisa kufuneka ugxininise imilinganiselo emibili: umbala kunye nokuthungwa. Ngombala, yonke into ilula okanye ingacacile: amantombazana ahlambulukileyo - umthunzi omnyama, ukhanyiswa kancinci - ukhanyisa. I-tonal ithetha enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ukwakheka ngokuphumelelayo, umthunzi ongakhethiweyo ungakhangela intombazana enhle kunazo zonke zibe yinto ehlekayo. Unokukhetha umbala owufunayo ngeendlela ezintathu.
Ngokuthi "ukutyikitya" (ukususela kwisiNgesi ukuhamba - isampuli). I-Swatch - le nto ifoto kunye nemveliso yokunakekelwa kwesikhumba, esasazeka kwi-intanethi i-bloggers kunye nabathandi bezonyango. Ngokuqhelekileyo, i-swatches ihamba kunye nenkcazo ecacileyo yemveliso kunye nokubonakala komntu, kunye neefoto ngaphambi kokuba emva kwesicelo.
Emva kokulungiswa kweendlela ngokusebenzisa i-intanethi sidlulela ekusebenzeni: sikhetha ukuthetha kwindawo. Ngokuqhelekileyo kuzo zonke iivenkile zokuzicoca kunezixhobo zokuvavanya - iindlela ezivulekileyo, apho wonke umntu anokuthintela, uphefe kwaye wenze nabo phantse yonke into ayifunayo. Njengoko uzama ikhambi le-tonal, ukuyibeka ngeminwe engcolileyo kumntu ongahlambulukanga akuyona ingcoce kakhulu, khetha umthunzi ofanele kumqolo wakho.
Indlela enokuthenjelwa kukuza kwisitoreji kwaye ucele abathinteli bee-shades ezahlukeneyo, kwaye ke ekhaya, ngaphandle kokukhawuleza, khetha okufanelekileyo kakhulu. Kodwa, ngelishwa, abachampuli abanikeli kakhulu kwiivenkile zezonyango.
Ubuhle bamehlo bufuna ukugxininisa bonke abafazi behlabathi. Kwaye ngokucacileyo umfundi ophezulu akayena mnye. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokubumba kweso: ubusuku, ubuso bomntwana, ukuzenzela ukutshulwa kwesithombe, umtshato, i-thematic, pin-up kunye nabanye abaninzi. Iintlobo zingachazwa ixesha elide kunye neenkcukacha. Kodwa siya kumisa kwiindawo ezenziwe zisetyenziswa kakhulu kwaye zilula kakhulu.
Inkqubo yokwenza i-makeup yile ndlela ilandelayo: Okokuqala sisebenzisa i-arhente ye-tonal ebusweni, senza ama-eyebrows, sithuthuzela izithunzi kwaye ekugqibeleni sisebenzisa i-mascara. Nangona kunjalo, akubona bonke abafazi abancinci abafuna zonke iindlela ezi ngasentla.
Ukuba intombazana inamacwe alula kwaye angabonakaliyo, unako ukuwafaka ngeepensile ezikhethekileyo. Into ephambili - khumbula ukuba ipensela emnyama ifanelana namantombazana anemisonto emnyama kuphela, inambuzane enombala obomdaka kunye nobomvu obomvu, kwaye i-blondes ingcono ngokusebenzisa umthunzi we-beige. Amantombazana angenzi isilungiso sokulungisa kwaye angasususi unwele olugqithiseleyo, kungcono ukuba ungaluthabatheli ngqalelo kule nxalenye yomzimba kwaye ushiye amaqabunga ambala kuze kube ngamaxesha angcono.
Ngethuba elimncinci, ungasebenzisi i-eyeliner okanye i-eyeliner emnyama. Imigca ecacileyo iya kwenza umntu omdala, umqeqeshi kunye nokumnciphisa ubumnandi bobutsha. Ukuba usenqwenela ngandlela-thile ukubethelela iipilisi zakho, kungcono ukuthobela iingqungquthela zeetoni ezithambileyo: beige, pink, peach, brown brown. Kodwa izithandwa ezininzi eziluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza kunye nemfusa kufuneka ziphetshwe.
Ukuba ubuhle obuncinane bubunqamle ukuya esikolweni, kunokunconywa ngokukhuselekileyo ukuba uzincitshe kumascara omnyama okanye omdaka kumqolo owodwa, ngaphandle kwemithunzi okanye ipensile. Iimpawu ezinamaqabunga ezinqabileyo kwaye unobtrusively ugxininisa ubuhle bemvelo bokukhanya kunye nemvelo.
Amantombazana amancinci atyhidile imilomo yawo ngemibala eqaqambileyo ayibangela ukumomotheka. Khumbula: ubume bendalo kunye kwakhona kwendalo. Ubomvu, obomvana okanye obomvu ngomlomo kwimeko yethu ayiyi kusebenza. Ukuba usasafuna ukubeka into ethile kuwe, isisombululo esipheleleyo siya kuba yintsimbi ecacileyo yomlomo. Uya kunika umlomo umthamo omncinci kwaye uya kugxininisa ubutsha kunye nokutsha.
Iklasi yeklasi: ukwakheka kwelanga
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza i-makeup, isikhumba kufuneka sikulungele. Ukuba ukhathalelo lwekrimeji lusetyenziswa kusihlwa, kufuneka uhlambe iimpahla zalo kunye nokuhlambulula amanzi, ukuba ubuso buhlambulukile, kufuneka nje uhlambe ngamanzi.
Icandelo elilandelayo lesikhumba kufuneka lithwetshwe kwaye lihlanjululwe kwiimpahla zokuhlambulula ubuso nge-tonic, i-lotion okanye i-micellar.
Sikulungisa iingxaki. Ukuba ulusu lubomvu, kuyimfuneko ukuba usebenzise ukulungelelanisa kubo ngokumelene ne-acne. Emva kokuba ukhilimu usomile, unokufumana i-corrector. Kubalulekile ukuba iimpazamo ezimele zifihliwe aziyi kuphuma emva kokuba i-corrector isetyenziswe ngakumbi. Ngoko ke, kufuneka uqikelele ngombala, uze udibanise ngokucophelela. Ukusetyenziswa kakubi komfundi-ubungqina akudingekile, kubangele ukukhutshwa kwamanzi kunye nokulandelwa, amatsha amatsha.
Ngoku okona kunomdla kunomthunzi. Ukudala ukulungiswa kwamehlo okugqibeleleyo, uzakufuna iimpawu ezintathu. Okokuqala kufuneka usebenzise uninzi olungathandabuzekiyo kwaye usondele kwithani yombala wesikhumba kuwo wonke umhlobiso we-eyelidi, ukusuka kwisiseko sangaphakathi ukuya kwi-eyebrow. Njengombala osezantsi, i-beige, ipereach, i-brown brown, i-pinki epholileyo okanye umbala wesanti ifanelekile. Emva koko inkophelo ehambahambayo, ukusuka kwi-eyelashes ukuya kumbimbi, kufuneka ufihle ngezithunzi zamthunzi omnyama nomthunzi. Njengomthunzi wesibini, ungasebenzisa igolide, umbala omnyama okanye umthunzi omnyama. Umbala wesithathu usetyenziswa ngendlela yekhaksi ekhoneni langaphandle lelihlo, oku kufuneka kube ngumbala omnyama kakhulu. Umzekelo, i-tshokoleta, ikhofi, i-lilac. Ukuze yonke imibala emithathu ibonakale ngokuvisisana, kufuneka imanyiswe ngokucophelela ngebhasi ekhethekileyo.
Siyakhathalela i-eyelashes. Ukuze ubeke kuqala i-mascara kwi-brush, kwaye ngoko kwi-eyelashes njengoko kufanelekile, bhenca i-brush out of the tube in spiral, ngaphandle koko ubuninzi bezinto ezibalalayo ziya kuhlala kumgca wokuthintela. Okokuqala udinga ukupenda iziphelo ze-eyelashes, uqhubekele ekunene nakwesobunxele, uze uqoke ezinye izidumbu kwi-tube uze ulungise umphumo, uhamba ukusuka kumacangci angaphandle. Uninzi lwe-smears kwindawo enye akufuneki ukuba ugweme ukubunjwa kwe "spider paws."
Umgca wokugqibela ngumlomo. Okokuqala kufuneka usebenzise umlomo we-hygienic nge-facscreen factor, kwaye ke, ukuqala phakathi, qa. Okokuqala kwiphakamileyo, kwaye emva koko umlomo ophantsi.
Ukuba ulusu lunamafutha, mhlawumbi kwiiyure ezimbalwa kuyo kuza kubonakala iindawo ezikhanyayo. Banokupheliswa ngokulula kunye namatope e-matting, mhlawumbi okukhumbuza isihlunu sesikolo samaxesha aseSoviet.
Iingcamango ezingcono ze-Japanese makeup: nsuku zonke, i-anime, ukwakheka kwe-geisha
Izifundo zokwenza ukwakheka kwinqanaba lase-oriental isinyathelo ngesinyathelo
Ukwenziwa kweTesha yoNyaka omtsha 2017 Firecracker: TOP-4
Ulwazi olunolwazi malunga nabadudli
Ukucoca ulusu lolutsha
Ukutya kukaMaya Plisetskaya
Inkcazo ecacileyo ye-Paulo Coelho
Ngaba abantwana be-Indigo isipho okanye isohlwayo?
AmaSandwich nge sausage kunye ne-jalapeno
Indlela yokwazi ngesondo lomntwana
Ziziphi iipilisi zokukhusela kunye nendlela yokuzikhetha?